Top 4 Music Librarys na Music Library ahazi .
Top 4 Music Librarys na Music Library Ọhazi
Ọbá akwụkwọ ahụ na-ahazi ndị mmemme na-ọ bụghị nanị na nyere ka ọrụ na-arụpụta ihe kasị mma ma ha na-eme ka n'aka na ihe kasị mma online ọdịnaya management usoro a na-emejuputa atumatu n'ihi na onye ọrụ. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma atụmatụ na na ya pụta na nke a dị ka a n'ihi online nkà na ụzụ na e wuru iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe nwere iji terminologies na usoro onwe ya. Ojiji nke online music ọdịnaya management usoro na-amụba na bụla na-agafe n'ụbọchị dị ka ihe na ndị ọzọ ọrụ na-eji ụlọ ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ọdịnaya na ha zụrụ dị ka ọ na jisiri site nnukwu aha nke ụlọ ọrụ na a stellar n'ụzọ.
Top music n'ọbá akwụkwọ software
N'okpuru ebe a bụ n'elu music n'ọbá akwụkwọ software omume na a ga-atụle n'isiokwu a iji jide n'aka na onye ọrụ na-aghọ maara nke onu:
5. TunesGo --the kasị mma music n'ọbá akwụkwọ Ọhazi
Ndị a ọbá akwụkwọ na na metụtara echiche ga-atụle na enyemaka nke screenshots mere na onye ọrụ mgbe ịnọgide ambiguous banyere functionalities na ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke a.
Kụziri site na ike nke Google nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma music ọba akwụkwọ niile ugboro na yiri usoro iji functionalities nwekwara e atụle n'isiokwu na zuru ezu.
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL http://music.google.com na-enweta ya na ọrụ na-sonyeere:
ii. Ọkọlọtọ akaụntụ a na-ahụ na-ahọrọ:
III. Ọkọlọtọ na akaụntụ mgbe ahụ ka ike melite:
too ogologo. Google obere akpa bụ mgbe ahụ na-Mbido nakwa mgbe abanye chọrọ ọmụma:
v. The ọmụma bụ-enyocha iji jide n'aka na Ịzụ bụ ihe ịga nke ọma:
vi. The music njikwa a na-ahụ na-ebudatara:
VII. The music njikwa ga-ahụ ga ebudatara:
nke Asatọ. Press ọzọ:
Itoolu. Nbanye site na Gmail akaụntụ eji maka ugwo:
x. The music njikwa bụ njikere ugbu a iji jide n'aka na nhọrọ na-eji:
Iri na Otu. Bulite songs:
xii. Maka ọdịnihu ojiji họrọ ihe kwesịrị ekwesị nhọrọ:
nke Iri na Atọ. Ọganihu nwere ike anya site na nri na ịpị Google music na akara ngosi na usoro tree na nke a kwa okokụre usoro. Onye ọrụ nwere ike eme ka ahụ n'aka na android ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ na jikọọ na kọmputa na songs na-synced mfe ka ya:
Ọ bụ-ahụ kwuru na ojiji nke YouTube music ma ọ bụ Audio n'ọbá akwụkwọ dị nnọọ mfe ma nkenke. Onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji jide n'aka na nhọrọ na-enyoba na nke kacha mma n'ụzọ na-Job mere:
m. The URL ka a bịa na nke a bụ https://www.youtube.com/audiolibrary/music mere na n'ụlọ peeji na-enweta:
ii. The menu na n'elu bụ na-eji na-eme ka n'aka na tracks maka oru ngo na-achọgharị site dị iche iche edemede:
III. Ogwe na nri na-egosi otú ewu ewu a track bụ:
too ogologo. Àkú nwere ike pịrị iji jide n'aka na track ebudatara mfe:
v. Ozugbo track e ebudatara ya nwere ike synced ma ọ bụ zigara ọ bụla android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ mezue usoro:
3. iTunes music n'ọbá akwụkwọ
Kụziri site na ike nke Apple Inc. na iTunes music Library bụ otu nke kasị mma iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ na-arụpụta na nke a. Nke a ọdịnaya management usoro na-emekwa ka n'aka na mmadụ na-akawanye na atụmatụ ndị na-adịghị dị na ihe ọ bụla ọzọ omume. Na-esonụ bụ usoro na-eme ka n'aka na iTunes na-eji na kasị mma n'ụzọ:
m. The iTunes bụ-ibudatara na URL https://www.apple.com/itunes/download/ ebe ọhụrụ version bụ mgbe niile emelitere. Onye ọrụ kwesịrị ka Soro kpaliri iji jide n'aka na software ọma arụnyere na ozugbo ọ e mere mgbe mmalite ya isi interface ga-adị ka n'okpuru:
ii. The buttons na n'elu a ga-eji maka navigating n'etiti dị iche iche faịlụ:
vi. Onye ọrụ kwesịrị ka jikọọ iOS ngwaọrụ a na kọmputa ka mmekọrịta ya na omume dị ka e gosiri:
VII. System ikike a na-ahụ a chọrọ ka ọma:
nke Asatọ. Site na isi menu onye ọrụ kwesịrị ka pịa nhọrọ nke nchịkọta:
Itoolu. The mmekọrịta button a na-ahụ na-enwe rụchaa usoro kpamkpam:
Iji mee ka n'aka na Spotify music ọdịnaya management usoro a na-eji ihe n'ụzọ dị irè ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro iji jide n'aka na ihe kasị mma n'ihi na ya pụta na-eme n'ihi na onye ọrụ:
m. Onye ọrụ kwesịrị ileta https://www.spotify.com/int/download/ iji jide n'aka na usoro ebudatara maka PC ma ọ bụ laptọọpụ:
ii. Onye ọrụ ahụ nwere ẹkedori usoro ihe omume iji jide n'aka na ndị na-esonụ ihuenyo egosi ebe onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na nbanye nkọwa na-nyere:
III. Ngwaọrụ bụ na-ejikọrọ na otu internet netwọk ka nke PC ma ọ bụ na laptọọpụ jikọọ:
too ogologo. The Spotify ngwa a ga-ebudatara maka ngwaọrụ nakwa:
v. Mgbe egbu osisi n'ime ngwa njirimara kwesịrị ịchọ ngwaọrụ ke spotifiy desktọọpụ ngwa:
vi. Onye ọrụ nwere ike ma mekọrịta egwu niile ma ọ bụ nwere ike dị nnọọ jide n'aka na ezi listi ọkpụkpọ na-synced mezue usoro na zuru:
TunesGo --the kasị mma music n'ọbá akwụkwọ Ọhazi
Family Ịkekọrịta Apple Music
> Resource> Music> Top 4 Music Librarys na Music Library ahazi